Xirmooyinka Xarunta Raadiyaha FM ee 600W oo leh RDS codeer
Wadarta (USD): 3289
Ku saabsan FMUSER FSN5-600W
FMUSER FSN5-600W Gudiyaha FM
Gaar ahaan kuwa kale ee 600W gudbiyaasha ee suuqa, FMUSER FSN5-600w FM gudbiyaha wuxuu leeyahay muuqaalkeeda hawlgalka shaashadda taabashada saaxiibtinimo ee bini'aadamka, aad u xasilloon oo wax qabad la isku halleyn karo, iyo u dhow saamaynta codka isteeriyo tayada CD-ga ah, taasoo ka dhigaysa horumar cajiib ah suuqa oo dhan. , waxayna u horseedaa caannimadeeda sare ee isticmaalka inta badan idaacadaha.
Gudbiyaha 600W FM waxaa loogu talagalay qaab is haysta oo ah 19 inch 2U chassis iyadoo la isku darayo dhammaan cutubyada gudaha, cabbirkoodu yar yahay, oo si fudud u shaqeynaya iyo dayactirka. Waxay qabataa transistor-ka RF ee ugu horumarsan ee BLF188XR AMA MRFE6VP61K25H, kaas oo hubinaya hufnaanta shaqo ee sare ee 72%, khasaaraha korantada waxaa loo dhimay qiimaha ugu yar abid.
Tiknooloojiyada DSP(Digital Sound Processing) waxay ka dhigtaa gudbiyaha FSN5-600w FM mid lagu raaxaysto baahinta codka ee dhammaan kuwa jecel muusiga, kuma dhibi doontid buuqa ama qallooca.
Xaqiijinta tayada ahaan, FMUSER Waxay siisaa dammaanad 1 SANAD ah gudbiyaha baahinta xirfadleyda ah, kama welweli doontid inaad u isticmaasho xarunta raadiyaha.
FMUSER RDS-A codeeyaha
FMUSER RDS-A Encoder wuxuu ku habboon yahay badi gobollada, maxalliga, RSL, LPFM, iyo idaacadaha kale ee warbaahinta-iyo idaacadaha yar-yar ee u isticmaala Ethernet qaybinta xogta firfircoon ee RDS. Ku-dhismay kontaroolaha Ethernet wuxuu taageeraa dhowr dekedood oo TCP/UDP ah, hawlaha internetka, iyo la socodka fogaanta.
FMUSER RDS-A Encoder wuxuu leeyahay fikradda DSP oo dhammaystiran iyo nakhshad wax ku ool ah waxay hubisaa isku halaynta sare, sifooyinka calaamadaha aad u fiican waxayna siisaa isticmaaleyaasha astaamo badan oo horumarsan iyadoo la ilaalinayo kharashyada iibsiga hoose.
1) IILAALINTA kulaylka xad dhaafka ah:
Gudbiyehu waxa uu u wareegayaa is difaac fariin qaylo dhaan ah iyo dhawaqa dhawaaqa mar hadii heerkulka shaqadu ka sare maro heerka caadiga ah.
2) IILAALINTA SWR:
SWR waa tilmaanta nidaamka anteenada ee ku xidhidhiyaha gudbiyaha. Marka xiriirku xumaado oo uu keeno qiimaha sare ee SWR, gudbiyaha wuxuu u wareegayaa habka ilaalinta tooska ah isagoo ku tusin doona fariinta alaarmiga oo leh dhawaaq dhawaqaya inta uu socdo.
3) Qeylo-dhaanta Cillad taageere:
Marka taageeruhu joojiyo socodsiinta, waxaa jiri doona fariin naxdin leh oo ka muuqan doonta shaashadda sida soo socota:
4) ISKU-BARIDKA INTA JOOGTADA AH:
Gudbiyaha 600W FM wuxuu si toos ah u baarayaa inta jeer ee ugu habboon ee anteenada si loo kordhiyo waxtarka baahinta ugu yaraan saamiga SWR, tani waxay hubineysaa waxqabadka ugu wanaagsan ee gudbiyaha iyo anteenada labadaba.
5) QAAB LAGU SAMEYN KARO:
Marka isku-darka maqalka lagu xidho gudbiyaha 600W FM iyada oo loo marayo isku-xidhka gelinta maqalka ee XLR Balanced, gudbiyaha ayaa bixin doona xulashooyin badan oo qaabaynta si ay ugu habboonaato isku-darka.
6) HAWLKA HAL TABAAB:
Gudbiyaha FSN5-600W FM waxaa loogu talagalay shaashad taabasho xasaasi ah oo sax ah oo lagu beddelayo badhamada kantaroolka gudbiyaashii hore. Iyadoo dhammaan macluumaadka si cad loogu soo bandhigay shaashadda, isticmaalayaashu waxay xakameyn karaan oo u habeyn karaan dhammaan xuduudaha si fudud.
7) DOORASHOOYINKA MAQALKA EE DABACSAN:
Xooga saaritaanka hore ee 600W FM gudbiyaasha waa dabacsanaan si loo kala xusho 0US / 50US / 75US, adeegsadayaashu waxay dooran karaan qaabka ciyaarta ugu fiican iyadoo loo eegayo baahidooda.
8) AWOODDA LA GUDBISAY:
RF ee ka soo baxa gudbiyaha 600W FM si joogto ah ayaa loogu hagaajin karaa 0-600 watt marka la marayo jaranjarada 0.1watt, taas oo macnaheedu yahay inaad ku hagaajin karto 1w, 1.1w, 1.2w...50w...100w...150w. ..350w...600w, oo leh hal gudbiye waxaad heli doontaa habab badan oo wax soo saar ah oo ay fududahay in la habeeyo hadba baahidaada.
9) RADIUS DHEERAAD AH
FMUSER FSN5 600W FM Gudbiye
Qiimaha tilaabada soo noqnoqda 10KHz
isbedbeddelka FM, leexashada ugu sarreysa ± 75KHz
Awooda wax soo saarka RF 0 ~ 600 watts ± 0.5dB
Hirarka haraaga ah <- 70dB
Harmonics sare <- 65dB
Caqabadda wax soo saarka RF
Isku xirka soo saarida RF
Ahmiyad-siin 0us, 50us, 75us (goob adeegsi)
S / N saamiga mono > 70 dB (20 ilaa 20KHz)
Saamiga S / N stereo > 65 dB (20 ilaa 15KHz)
Jawaabta inta jeer ee codka 30 ~ 15000Hz
Heerka codka maqalka
-12dB ~ 12dB tallaabo 3dB
Operating kala duwan heerkulka -10 ilaa 45 ℃
cabbir 483 x 320 x 88 mm oo aan lahayn gacan-qabasho iyo soo bixitaan, 19 "2U rack standard ah.
FMUSER RDS- Codeeyaha
* Codeeyaha RDS oo si buuxda u firfircoon oo FM ah oo leh illaa afar dekedood oo isgaarsiineed oo madaxbannaan
* Isku xidhka USB ee goobaha deegaanka iyo ujeedooyinka dayactirka
* Isku xirka Ethernet ee isku xirka nidaamka automation baahinta
* Xakamaynta interface ku salaysan amarrada ASCII iyo borotokoolka UECP
* Waxay taageertaa hawlaha internetka iyo la socodka fogaanta
* Astaamaha qoraalka waxaa ka mid ah PS firfircoon, kala shaandheyn, rog-rogid, calaamadeyn, fariimo go'an, jadwal, iyo akhrinta HTTP
* Waafaqid heersare ah oo la socda nidaamyada iswada baahinta
* Software-ka xakamaynta waxaa ku jira codsi Windows GUI awood leh
* Waxay taageertaa xakamaynta qoraallada PHP/ASP ee dibadda ah
* Habayn fudud oo degdeg ah
* Nadiifin muuqaal heer sare ah, isku dhafka calaamadaha RDS dhijitaalka ah ee tooska ah; U hoggaansanaanta EN 50067 / EN 62106
* Laba barnaamij oo la beddeli karo (oo leh ikhtiyaarka DSN iyo dejinta PSN)
* Dibadda TA iyo beddelka barnaamijka
* Gudbinta dhaafitaanka, isku halaynta sare
* Qaabka wareegga MPX ee la bedeli karo (Loop/Side)
* Saacadda gudaha ee waqtiga-dhabta ah oo ay ku jirto batari kayd ah
* Looma baahna 19 kHz gelinta gaar ah - codka tijaabada gudaha laga soo kabsaday calaamadaha MPX iyadoo la adeegsanayo PLL dhijitaalka ah